बाख्रा पालनको पकेट क्षेत्र बनाउने अभियानमा कृषकहरु – Tanahun Khabar
हरि खरेल/ फिरफिरे । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं. १२ स्थित रातमाटा गाउँलाई बाख्रा पालन नमुना गाउँ बनाउने अभियानमा स्थानियहरु लागि परेका छन् । रातामाटा क्षेत्रमा बाख्रा पालन को सम्भावना राम्रो भएको भन्दै स्थानियहरुले बाख्रा पालन पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न एकजुट भएका हुन् । आधुनिक किसिमका खोर निर्माण र उन्नत जातका घाँसंहरु लगाउदै आएको बाख्रा पालक कृषक सुक बहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।
विगत ४ बर्ष देखी आफ्नै क्षेत्रमा व्यवसायिक रुपमा बाख्रा पाल्दै आएका गुरुङले एउटा खसि वा बोका बेच्दा २० देखी २५ हजारसम्म आम्दानि गर्ने गरेको बताए । बाख्रा पालन गर्दा गुरुङले बार्षिक २ लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् । “बजारमा खसि बोकाको माग अत्याधिक रहेको छ तर हामीले पु¥याउनै सकेको छैन ।” गुरुङले भने, “बाख्रा पालन व्यवसाय गरे निकै फाईदा हुन्छ । विदेशमा ४ बर्ष बसेर नेपाल आएको केही समयपछि बाख्रा पालन सुरु गरेको ४ बर्ष भईसक्यो अझसम्म राम्रै भईरहेको छ ।” अहिले गुरुङले २६ वटा बाख्रा पलेका छन् ।
वडाले रातोमाटा क्षेत्रलाई बाख्रा पालन पकेट क्षेत्रको रुपमा स्थापना गर्न लागेको हुदाँ निर्वाहमुखीबाट व्यवसायिक रुपमा बाख्रा पालन सुरु गरेको दिवस सुनारले जानकारी दिए । आफुले पहिलेदेखी नै बाख्रा पालन गर्दै आएता पनि बजारमा माग राम्रो हुदाँ बाख्राको संख्या वृद्धि गरी व्यवसायिक रुपमा अघि बढेको बताए । बाख्रा पालन गर्दा बाख्राको मलको पनि प्रयोग गरी सिजन अनुसार तरकारी खेति पनि गर्दा दोहोरो फाईदा निकाल्ने गरेको बताए । सुनारका अनुसार आफु लगायत अन्य कृषकहरु मलको सदुपयोग गरि रातामाटा क्षेत्रमा ७ वटा टनेल बनाई गोलभेडा तथा तरकारी खेति गर्दै आईरहेका छन् ।
वडाको बाख्रा पालन पकेट क्षेत्रको रुपमा स्थापन गर्न स्थानियहरु मिलेर तिनखोले बाख्रा पालन समिति बनाई निरन्तर रुपमा कार्य गदै आईरहेका छन् । उक्त समितिले पकेट क्षेत्रको लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी बाख्रा पालक किसानहरुलाई आवश्यक ज्ञान प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
एक वडा एक उत्पादन अभियान अन्र्तगत वडा नं. १२ लाई बाख्रा पालन नमुना गाउँको रुपमा स्थापना गर्नका लागि निरन्तर रुपमा लागि परेको वडाध्यक्ष मनराज गुरुङले बताए । किसानहरुलाई बाख्रा पालन तर्फ आकर्षित गराउन अनुदान स्वरुप ३० हजार देखी १ लाखसम्म रकम प्रदान गरेको बताए । वडाको रातामाटा क्षेत्रमा बाख्रा पालक किसानहरु बढी रहेका हुदाँ यसै आर्थिक बर्ष भित्र बाख्राको पकेट क्षेत्रको रुपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य समेत रहेको वडाध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए ।